“Hal Khalad aan galay dartii ayay dadku isku dayeen inay duugaan Riyadayda!!”. Goolhayihii amray in la jar-jaro xaaskiisa dabadeedna Eeyihiisa loo quudiyo!!! - Gool FM	twitter
“Hal Khalad aan galay dartii ayay dadku isku dayeen inay duugaan Riyadayda!!”. Goolhayihii amray in la jar-jaro xaaskiisa dabadeedna Eeyihiisa loo quudiyo!!!
(Brazil) 19 Mar 2017. Goolhaye Bruno Fernandes de Souza ayaa usbuucii la soo dhaafay ku biiray kooxda Boa Esporte ee ka ciyaarta heerka labaad ee horyaalka Brazil kaddib markii laga soo daayay xabsi uu ku soo qaatay 6-sano.
Goolhayaha reer Brazil ayaa lagu xukumay 22-sano oo xarig ah kaddib markii uu amaray in la dilo saaxiibtiisa mar ay ku murmeen cida caawineysa canug ay u dhashay kaas oo uu markii horeba ka soo hor jeeday inay u dhasho iyadoo xitaa marar badan uu isku dayay inuu siyo maandooriye ka soo rida canuga.
Bruno Fernandes de Souza ayaa la sheegay inuu ku dalbay gacalisadiisa rag dilaa ah oo inta marka hore garaaceen dabadeed dileen iyagoo cad cad u jar jaray isla markaana ku quudiyay Eygiisa, waxayna intaa kaddib duugeen lafihii iyo wixii kale ee ka soo haray jirkeeda.
Sikastaba, goolhaye Bruno oo bishii la soo dhaafay laga soo daayay xabsiga kaddib lix sano uu ku soo qaatay ayaa waxaa yaab noqotay inuu wareysigiisii ugu horreeyay ku sheegay inuusan ahayn qof xun.
“Saaxiib wixii dhacay way dheceen,” Goolhayaha ma naxaaanka qaba ayaa sidaa u sheegay Guardian.
“Waxaan sameeyay Khalad, mid aad u halis ah, laakiin khaladaadku way ka dhacaan nolosha, ma ihi qof xun.
“Dadku waxay isku dayeen inay duugaan riyadeyda hal khalad aan galay dartii, laakiin Alle ayaan waydiistay cafis, sidaa darteed saaxiib waxaan xiiseynayaa waayaheyga ciyaareed, dib ayaan u bilaabayaa”.
Naago ayaa ku dibad-baxay goolhaye Bruno markii ugu horreysay uu tababarka la qaadanayay kooxdiisa cusub ee ka ciyaarta heerka labaad ee horyaalka Brazil waxaana xusid mudan in goolhayahani uu ahaa mid mustaqbal ifaya leh ka hor inta uusan geysan falkan wuxuushnimada ah oo waxaa xitaa la filayay inuu koobka adduunka ku mateli doono xulkiisa Brazil ee 2014.